INkosi Buthelezi iphawula ngolwase-Msunduzi | News24
INkosi Buthelezi iphawula ngolwase-Msunduzi
INHLANGANO iNkatha Freedom Party (IFP) yethule usomqulu(manifesto) wayo eMgungundlovu nalapho kade inxusa khona amalunga ayo ukuba ayethembe uma ngabe eseye kovota okhethweni lukazwelonke oluzoba mhla ziyi-8 kuNhlaba (May).
Le manifesto yethulwe eWinston Churchill eScottsville nalapho amalunga e-IFP ebephume khona ngobuningi bawo ukuzokwethamela ngesikhathi umongameli wayo le nhlangano iNkosi Mangosuthu Buthelezi ezokwethula inkulumo yakhe.
UButhelezi utshele abalandeli balenhlangano akade bezolalela ukuba esikhathini esiyiminyaka eli-10 iqembu elibusayo lehlulekile ukulawula uMasipala uMsunduzi kwaze kwafika ekutheni uze ufakwe ngaphansi kwehlo lomlawuli kabili.
“Sekungokwesibili eminyakeni eli-10 uhulumeni wasekhaya kwale kancane ukuthi kwaze kwadingeka ukuba kungenelele ungqongqoshe.
“Kumanje lo masipala unezikweleti zemali engu-R3 billion.
“Ngesikhathi kwenzeka loku okokuqala umasipala ufakwa ngaphansi kwehlo lomlawuli akekho okwaqondiswa kuyena kwathiwa yiphutha lakhe. I-Pietermaritzburg Chamber of Business yathi akekho umuntu owachaza ngezinqumo ezingalungile ezagcina ziholela ekutheni umasipala ube sesimweni esinje.
“Ngamanye amazwi kuchaza ukuthi ayikho into eyenziwa ukuthi kuvinjwe ukuthi umasipala ungasafakwa ngaphansi kweso lomlawuli,” kusho yena.
Uqhube wathi ukungaphathwa kahle kwalo masipala kanye nokuthatha izinqumo ezingalungile yikhona okuholele ekutheni lo masipala ugcine usubishe ezinkingeni zezimali.
Uthe ukufakwa kwalo masipala ngaphansi kweso lomlawuli angeke kuze kube nomthelela omubi ekulethweni kwezidingo zomphakathi ngokushesha kodwa kuzoba nomthelela omubi futhi nasekuthuthukeni kanye nokukhula komnotho waseMgungundlovu.
“Uma ngabe ufuna ukutakula umnotho waseMgungundlovu qala ngokuthi utakule idolobha kuqala, ungavoteli ubuholi osebehlulekile. Njenge-IFP sizokwazi thina ukubuyisa inani kanye nezimiso zobuholi bakulesi sifundazwe,” kubeka yena.
Inkosi Buthelezi iyalele abalandeli akade begcwele ihholo ukuba bethembe iqembu le-IFP ukuba lizokwenza ushintsho uma ngabe belivotela.